Askarigii Dilay George Floyd Afar daqiiqo kadib, isaga oo katiinadaysan oo loo qaaday xabsiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Askarigii Dilay George Floyd Afar daqiiqo kadib, isaga oo katiinadaysan oo ...
Askarigii Dilay George Floyd Afar daqiiqo kadib, isaga oo katiinadaysan oo loo qaaday xabsiga
Kadib wax ka yar maalin iyo ku dhawaad toban saacadood oo wada tashi ah, waxay ku yimaadeen go’aankoodii. Markay ahayd 23.05, waqtiga Sweden, ayuu qaaliga Peter Cahill akhriyay xukunka. Expolis Derek Chauvin waa dambiile dhamaan sedexda dacwadood.
Afar daqiiqo kadib, isaga oo katiinadaysan ayaa loo qaaday xabsiga. Garsooruhu wuxuu xukumay inuusan sii wadan doonin xoriyaddiisa damiin ilaa xukunkiisa siddeed toddobaad gudahood
Isla markii uu qaadigu ku dhawaaqay go’aanka xeerbeegtida, farxad iyo reyn reyn ayaa ka dhex dhacday kumanaanka kun ee isugu soo baxay jidadka iyo fagaarayaasha Minneapolis iyaga oo cabsi ka qaba xukunka.
Dhimashadan aadka loo hadal hayo ayaa ka dhacday bishii May ee sanadkii hore magaalada Minneapolis. Fiidiyow uu duubay goobjooge ayaa muujiyay sida booliisku jilibkiisa ugu hayey Floyd qoortiisa xarig kadib wuxuuna ku celceliyay inuusan neefsan karin.
Xilliga kuleylaha, mudaaharaadyo ayaa ka dhacay Mareykanka oo dhan oo looga soo horjeeday Madow naceeybka booliiska ka dib geeridii George Floyd.
Maxkamadaynta ayaa muujisay in Derek Chauvin uu jilibka ka haysto qoorta George Floyd sagaal daqiiqo iyo 29 ilbiriqsi.
Asalka qabashada ayaa ahayd in booliisku helay qaylodhaan ah in nin isku dayay inuu ku bixiyo dukaan lacag been abuur ah.
Booliska ayaa garaacay daaqada markii uu furay Floyd, hub ayaa madaxiisa aadiyey waxaana laga codsaday inuu ka dego gaariga.
Previous articleSoomaaliya oo kaalin hoose ka gashay ilaalinta Xuquuqda Wariyayaasha
Next articleMadaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif oo xalay u guuray oo xarun ka dhigtay Waqooyiga Muqdisho.
Dhibaatooyinka Shaqo la’aanta: Qaar ka mid ah howlaha ugu yaabka badan adduunka
Wasiir Warfaafinta Dubbe oo sheegay in uu dhacayo banaanbaxa Mucaardka balse...
Mohamed Abdullahi Mohamed - March 3, 2021 0
Wasiirka Warfaafinta ayaa meesha ka saaray in uu baaqdo Banaanbaxa lagu wado in uu dhaco maalinta sabtida ah, waxa uuna walaac ka muujiyay fiditaanka...
Gudoomiyaha G.Hiiraan iyo Gudiga Fatahaada Balaweyne Oo Kormeeray Kaliga Waraabole.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo kulan hawleed shaqo la...
Deeqo Soomali oo Dowlada Farmaajo Pasaboorkeda ka soo qaatay...
Shir goor dhawayd u furmay Beesha caalamka iyo Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday.
Dowlada Somali oo soo saartay digniin ka dhan ah Qaadka...
Siyaasiga Cabdirmaan Cabdishakuur oo u hanjabay Madaxweyne Farmaajo
Dhibaatooyinka Shaqo la’aanta: Qaar ka mid ah howlaha ugu yaabka badan...
Golaha Ammaanka ee QM oo cambaareeyay qorshaha ay dowladda Turkey...
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 24, 2021 0